बाइडेनले सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत विद्युतीय गाडी बनाउने आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
वासिङ्टन / अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०३० मा ५० प्रतिशत विद्युतीय गाडी बिक्री हिस्साको लक्ष्य निर्धारण गर्ने कार्यकारी आदेशमा बिहीबारको हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको उनको कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।
वासिङ्टन स्रोतका अनुसार विश्वभरि बढ्दो प्रविधिहरूको बावजुद, विद्युतीय र त्यसमा प्रयोग गरिने ब्याट्री निर्माण गर्ने दौडमा अमेरिका पछाडि रहेको छ ।
तसर्थ, बाइडेनको नयाँ एजेण्डा अमेरिकालाई विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन, पूर्वाधार र नवीनतामा नेतृत्व गर्ने योजनासहित आएको छ ।
ट्रम्प र बाइडनमध्ये कुन राज्यमा को अगाडि ?
जो बाइडेनको जितलाई सिनेट रिपब्लीकनले बल्ल पत्यायो !
बाइडेनको चेतावनीपछि ट्रम्पद्वारा राहत प्याकेज सम्बन्धी आदेशमा हस्ताक्षर
अमेरिकी संसद भवनमाः हमला,ट्रम्पमाथि “सत्ताविद्रोह”को आरोप